६ वर्षअघिको महाभुकम्पले सुकेको तातोपानीको मुल पुनः पलायो ! – Sandesh Press
६ वर्षअघिको महाभुकम्पले सुकेको तातोपानीको मुल पुनः पलायो !
रसुवा – ६ वर्षअघि गएको महाभुकम्पपछि सुकेको रसुवाको एउटा तातोपानी कुण्ड पुनः भरिएको छ । आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका–५ तातोपानीस्थित यो कुण्ड ०७२ सालको महाभुकम्पपछि सुकेको थियो ।
तातोपानी पोखरीमा नुहाएमा छालासम्बन्धी रोग, शरीरको ख’टिरा, द’म, गा’नो गोला बा’थ, चर्मलगायतको रोगबाट ग्र’सित बिरामी ठिक हुने विश्वास छ । तातोपानी कुण्डमा नुहाउन स्वदेशी मात्र नभएर बिदेशी पर्यटन समेत आउने गर्थे । दुई हजार ६ सय ४५ मिटरको उचाइमा अवस्थित तातोपानी कुण्डलाई भुकम्पको कम्पनले पु¥याएको क्षतिपश्चात पुनः पहिलेको अवस्थामा फर्किएको हँुदा पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थानको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने जानकार बताउँछन् रसुवा – ६ वर्षअघि गएको महाभुकम्पपछि सुकेको रसुवाको एउटा तातोपानी कुण्ड पुनः भरिएको छ । आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका–५ तातोपानीस्थित यो कुण्ड ०७२ सालको महाभुकम्पपछि सुकेको थियो ।
तातोपानी पोखरीमा नुहाएमा छालासम्बन्धी रोग, शरीरको ख’टिरा, द’म, गा’नो गोला बा’थ, चर्मलगायतको रोगबाट ग्र’सित बिरामी ठिक हुने विश्वास छ । तातोपानी कुण्डमा नुहाउन स्वदेशी मात्र नभएर बिदेशी पर्यटन समेत आउने गर्थे । दुई हजार ६ सय ४५ मिटरको उचाइमा अवस्थित तातोपानी कुण्डलाई भुकम्पको कम्पनले पु¥याएको क्षतिपश्चात पुनः पहिलेको अवस्थामा फर्किएको हँुदा पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थानको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने जानकार बताउँछन्
Prevयी ४ प्रकारका स्त्री संग नगर्नु विवाह
Nextभाइरल झाक्रीलाई मा र्ने मान्छेको पत्ता लाग्यो,यसरी स र्प खेलाउन लगाएका थिए झाक्रीलाई (भिडियो हेर्नुस्)